Ukubuyela emva kwe-Frontcountry ne-Slackcountry Hiking
Hayi yonke inyuko i-adventure ye-backcountry
Igama elithi "ukubuyiselwa kwemali" liqinisekisile lento ethile yam. Intsingiselo yangempela yegama yinto enokuguquguquka, nangona kunjalo, kuxhomekeke kuloluphi umdlalo owenzayo. Abanye abantu baze bathi "ukubuyela emva" kuya kuba lixesha lokuphromotha elingenakuhlala lininzi malunga nokusetyenziswa kwalo kwasekuqaleni.
Kodwa ngokubanzi, uya kuziwa emva kokubona okanye ukuva. Kwam, ukubuyela emva kwindawo apho isevisi yefowuni isima khona.
Kuthetha indawo zasendle nezingahlaziywanga, ezingenazo iindlela zokufikelela ezindlwini, izindlu kunye nezinye izinto ezifanelekileyo zokuphucula imiphakathi. Apho amanzi okuphela kuphela aphuma kumlambo.
Ungakwazi ukubeka igama kumxholo weenkonzo eziphuthumayo: Ukuba ungaphezu kweyure okanye ezimbini kude noncedo lwezonyango, zicinge ngokwakho. Ukunyamekela kwakho, ixesha elide kunye nobunzima xa kukho nayiphi na inkululeko iya kuba-ukuba ukuhlangula kunokwenzeka. Ukubuyela emva kwindawo ezukileyo yokuhamba, kodwa kufuneka uceba ukuhlala unelisekile kunokwenzeka xa ulapho.
Ukuba ukhona okanye usekufutshane nenkqubo yeendlela kunye nenkonzo yefowuni kunye nokukhawuleza, ukufikelela okulula kwiinkonzo eziphuthumayo, usekuhlaleni. Iindlela ezihamba phambili eziqhelekileyo zibheke ngaphandle ngaphandle okanye ngasekunene kwintsimbi yesidolophu okanye idolophu, ngaphakathi kwindlela elula - ngamanye amaxesha nakwiindawo ezithandwayo.
Kwaye kukho i-Slackcountry
Cinga ngobunzima bokungena kwiindawo ezinokungena kwiindawo ezilula kunye neengozi zokubuyela ekhaya.
I-Slackcountry yindawo apho unokubona okanye ukuva impucuko, okanye nje uyazi ukuba kusondele, kodwa ayikwazi ukufika khona lula. (Ewe, kukho ukulungelelaniswa kweentlobo zokungena .)
Kutheni Kulo Mbuzo?
Kukho intaba ethile e-Alaska eyona mzekelo obalaseleyo wendawo ye-slackcountry. Umkhulu omkhulu, umgca we-trailhead we-Flattop Intaba uhleli ngaphandle komda we-Anchorage; ngosuku olukhanyayo, unenhlanhla ukufumana indawo yokupaka.
Uza kubona wonke umntu ovela kwi-octogenariya kubantwana abancinci kunye neenja ezikhuphukela kule ntaba, kwaye kuphela ezimbalwa zazo zikhutshwa yinto yokugqibela yokukhwaza. Ngethuba nje xa bephulile kunye nesineke, phantse nabani na oya kufika, kwaye emva koko, le ntaba.
Kodwa oko kufikeleleka kukujika le ntaba ibe ngumgibe kubantu abangenakulungele ukujongana nokutshintsha kwezulu ngokukhawuleza kunye nemimandla emibi. Benza iphutha lokufikelela ngokulula kwimimiselo kunye nezimo ezilawulwayo. Kukho ukuhlangulwa ngenxa yabathenjwa abaye bawela emanqabini aphezulu entabeni okanye baxhamla ngaphandle kolawulo ngexesha lexesha elidlulileyo le-snowplanes, i- avalanche kunye nokulimala kwamanye amaninzi. Enyanisweni, ukukhululwa apha kuqhelekile kangangokuthi abaqhelanga ukwenza iindaba.
Isifundo apha asikuphepheli ukubuyela emva okanye ukulahla. Akukho nto ifana nomva wokuncinci, ukuthobeka kunye nokuba ngumntu oza kunye nokuphuma kwiihlabathi zethu ezizilungele ukulungelelanisa nokuxhuma kwiingalo zomzimba ophilileyo, ophefumulayo obuninzi nangaphezulu kunokuba siza kudala.
Qinisekisa ukuba uyayiqonda into oya kuyo. Fayile isicwangciso sohambo ukuze abanye bazi apho kwaye nini ukuqala ukukhangela ukuba kukho into engaphumelekanga, kwaye qi ni sekise ukuba uphathe izinto ezilishumi .
Ngaloo ndlela unokukhaba kwaye ujabulele uhambo, ukhuselekile ngolwazi ukuba nayiphi na into ephakanyayo, ulungele ukuyisebenzisa.
Ukuhlukana Kukunzima Ukwenza: Iingcaphuno Ngothando Nokulahleka
13 Eziqhaqhaqhaqisayo Izinto ezichazelayo ebumnyameni
Iklasikhi edibeneyo njengeNgcono ePhambili
Ngaba i-'Avant Que 'idinga ukuhlanganiswa?
Indlela yokuhlaziya i-Guitar yakho ukuvula i-E